Nyasha Carter Zvinyorwa pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Nyasha Carter
Nyasha Carter inyanzvi yekunyora pa Academized uye Rubatsiro rweAustralia services. Iye anoshanda pane shanduko yekuvandudza uye anovandudza nzira dzekutengesa. Zvakare, Nyasha mudzidzisi pa Psychology Basa Rekubatsira webhusaiti yezvidzidzo.
China, July 19, 2018 Chitatu, July 18, 2018 Nyasha Carter
Nekugadzira zvemukati vanhu vanowana zvinonakidza uye zvine chekuita, iwe unogona kusimudzira yako saiti kuoneka pane zveGoogle mitsva yekutsvaga. Kuita izvo zvinobatsira kukumisira dzimwe shanduko. Asi kungoita kuti vanhu vatarise zvinhu zvako hazvireve kuti ivo vari kutora matanho uye nekukupa iwe shanduko. Tevedzera aya manomwe ecommerce matipi ekugadzira zvemukati zvinoshanduka. Ziva Mutengi Wako Kugadzira zvemukati zvinoshandura iwe unozofanirwa kuve nerakajeka zano reizvo zvako